Ady amin’ny covid-19: manomboka mivaha ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana | NewsMada
Tsikaritra eny anivon’ny fiarahamonina fa mihagoragora ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy ny tahotra ny aretina intsony no anaovan’ny olona arotava fa tahotra ny mpitandro filaminana.
Eny an-dalambe, efa misy mahasahy tsy manao arotava intsony. Vao mivadika any anelakela-trano dia efa esorina ny takom-bava. Tsy misy manao fiarovana izany amin’ireo toerana tsy fandehanan’ny mpitandro filaminana.
Tsy voahaja intsony koa ny elanelana na amin’ny fisisihana taxi-be, amin’ny hariva, na eny an-tsena na eny an-dalana. Miverina amin’ny teo aloha ny fiainan’ny mponina eto
Antananarivo ary vitsy ireo tena manaja ny fepetra ara-pahasalamana.
Ho an’ireo taxi-be, tsy misy mampiasa « gel désinfectant » hozaraina amin’ny mpandeha intsony. Tsy ampiasaina, araka ny tokony ho izy, ny arotava ho an’ny mpamily sy ny mpanampy azy. « Mafana ny andro ka mahatsiaro ho voahelingelina izahay », hoy izy ireo. Ny mpandeha taxi-be betsaka ireo manala arotava rehefa tafapetraka mahazo toerana ao anaty fiara ary tsy misy mifampiteny.
Any an-tsekoly, ho an’ireo efa niditra nianatra kosa, misy ireo manaja tsara ny fepetra fiarovana amin’ny fakana sy fanaterana mpianatra. Toraka izany ny biraom-panjakana sy ny orinasa izay mbola sarotiny amin’ny fanasana tanana mialoha ny hidirana ao an-toerana sy fanaovana arovava. Eo koa ny fiangonana izay fatra-panaja ny fepetra rehetra mba hahalavorary ny fahasalaman’ny kristianina.